February 2019 – Wire Nepal
wirenepal February 12, 2019
साना बच्चा प्रायः रातको समयमा रोएको सुनिन्छ । बच्चा दिनभर सुतेर राति रुने हुँदा आमाले भने हैरानी खेप्नुपरिरहेको हुन्छ । बाहिरी दुनियाँमा आइसकेपछि बच्चाले नयाँ…
२९ माघ, काठमाडौं । चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सहयोगार्थ मलेसियाबाट ३५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जुटेको छ । ‘सिटी एक्सप्रेस धुर्मुस सुन्तली…
काठमाडौं । के तपाईं अष्ट्रेलियामै रहेको बेला तपाईंको भिसा रिजेक्ट भयो ? त्यसो हो भने तपाईंले कुनैपनि चिन्ता लिनुपर्दैन । किनभने अष्ट्रेलियाको माइग्रेसन कानूनले अष्ट्रेलियाको…
जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ ? यसरी तयार हुनुहोस्
एक सफल जीवनयापनका लागि हामीले धेरै ठाउँमा धेरै प्रकारका इन्टरभ्यू (अन्तर्वार्ता) फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । स्कूलमा भर्ना हुन, कलेज ज्वाइन हुन, जागिर खान अन्तर्वार्ता अनिवार्य…
भारतको पोस्टमा नेपालको २ गोलदेखि आइसिसी वरियतामा नेपालको छलाङसम्म १९ खबर एउटै क्लिकमा
1. जनतामा निराशा फैल्याउन स्वार्थी तत्वहरुले षड्यन्त्र गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने आधार तय भईरहेका बेला उनीहरुलाई निरास बनाउने…
सोसल मिडियामा आफूलाई पछ्याउनेहरुको संख्या तिव्र रुपमा बढुन् भन्ने चाहना कसको नहोला र ? कतिपय सेलिब्रेटीले त आफ्नो इन्स्टाग्राम लगायतका सोसल मिडियाका फलोअर्सको संख्या बढाउनकै…
काठमाडौं । सावित्रा भण्डारीको दुई गोल प्रेरित नेपालले हिरो वुमेन्स गोल्डकपमा आयोजक भारतबिरुद्ध २–१ को रोमान्चक जित निकालेको छ । सावित्राले खेलको सुरुआतमा गरेका दुई…
wirenepal February 9, 2019
आज माघ २६ गते शनिवार अधिकाशं मिडिया प्रचण्डले पछिल्लो समय दिएका अभिव्यक्तमा व्याख्या विश्लेषण गर्न केन्द्रित छन। प्रचण्डको अभिव्यक्ती आउनुको कारण र परिणामबारे मिडियामा बहश…
प्रचण्डको किन फेरियो अभिव्यक्ती ? गगनपथ पछ्याउँदै काफ्लेले भने,’सरकार नेविसंघलाई नजिस्क्याउनु
wirenepal February 8, 2019
आज माघ २५ गते शुक्रवार अर्को माओवादी जन्मन सक्छः प्रचण्ड भन्दै अनलाइनखबरले समाचार लेखेको छ। प्रचण्डको यो अभिव्यक्ती आज अधिकाशं अनलाइन मिडियाको मेन न्यूज बनेको छ। सोसल मिडियामा भाइरल भएको छ।
हिजो मात्रै प्रचण्डले चितवनबाटै भेनेजुयला प्रकरणबारे बोलेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेनेजुयला वक्तव्यमा दाहाल चिप्लिएको बताएपछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नेकपा सचिवालय बैठकले भेनेजुयलामा अमेरिकी हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोधमा वक्तव्य जारी गरिसकेकाले अब कुन व्यक्तिले के भन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन।पछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि त्यही स्पिरिटबाट विज्ञप्ति आयो। व्याक्तीको कुराको पछि नलागौ।’
भेनेजुयला प्रकरणबारे प्रचण्ड र ओलीको दोहोरी हिजो अधिकाशं अनलाइन मिडियाको मेन न्यूज थियो।
आज फेरि सार्वजानिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। शान्ति सुरक्षा, बजेटलगायतमा विषय सरकार संविधानको भावनाअनुसार नचलेको आरोप लगाए। कसैको नाम नलिइकन प्रचण्डले माओवादीलाई सिध्याइहालियो, अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नठान्न चेतावनीसमेत दिए।
‘माओवादीलाई सिध्याइहालियो ठान्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। अर्को माओवादी जन्मिन्छ, झन ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ’ उनको अभिव्यक्ती थियो। उनले कार्यक्रमभरि नै सरकारको आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘ ‘सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्नेतिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं ? फेजआउट गर्नेतिर त गइरहेका छैनौं ? ।’
केही दिनयता प्रचण्डको अभिव्यक्ती फेरिँदै गएको छ। के कारणले प्रचण्ड प्रम ओली र सरकारविरुद्ध बोलिरहेका छन त ? Read more about प्रचण्डको किन फेरियो अभिव्यक्ती ? गगनपथ पछ्याउँदै काफ्लेले भने,’सरकार नेविसंघलाई नजिस्क्याउनु …
प्रदेश नंबर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रर्दशनरत फिल्म ‘सय कडा दश’ हेरेका छन्। हेटौँडाको एन एस सिनेमा हलमा फिल्म हेरेपछि उनले नेपाल सरकार तथा…
बुधबार र बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाको न्युनतम तापक्रम ८ डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा छ । शुक्रबार बिहान साढे ६ बजेको न्युनतम तापक्रम ८ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस…
आमिर खान स्टारर हिन्दी चलचित्र ‘थ्रि इडियट्स’को एउटा दृश्यमा फरहान भन्छन्, ‘जतिबेला परीक्षाको नतिजा बोर्डमा साथी (रैन्चो)को नाम फेला परेन, उनी फेल भए कि भन्ने…